Imba - Mytika Speak
Iko Kunzwisisa uye Kunzwa Kubatana
Twin Flames & Divine Rudo
Mwari & ZveMweya
Ego & Izvo Zvepanyama
Hunhu uye Hunhu
Balance uye Iyo Grey
Pasi uye Simba Rinoyerera
Kunzwa, Makiyi uye Kuratidzwa
Karma, Kuberekwazve uye Kuwedzeredzwa
Pfungwa, Zvinokanganisa uye Zviratidzo
Ndeapi mamwe maexercise emapatya murazvo achangosangana?
Vanogona here mapatya moto kuva akafanana murume kana murume?
Chii chinogona kubatanidzazve mapatya murazvo kuita?
Ndinoziva sei kuti mapatya marimi ariko zvechokwadi?
Kune akawanda maekisesaizi ayo mapatya marimi anoita pamwe nemumwe kuitira kuenzanisa uye kukura pamwe chete. Izvo chaizvo zvezviitwa izvi zvinogona kupihwa ...
Ndinoziva sei kana ndichinyatso kuziva chimwe chinhu?
Pane here iri nyore nzira yekuziva yangu yepamoyo Ray?
Ndinoziva sei kuti ndasangana neangu Chaiye Wechokwadi kana Ego?
Ini ndinoita sei kuva empath?
Chii chinonzi kujekeswa?
Ndomira sei kuita fuse fupi?
Ndomira sei kuita manipulator?
Pane munhu anosvika padanho rekugutsikana nehupenyu here?
Mapatya murazvo parizvino urikubatanazve zvimwe?
Ndingaite sei kuti ndigadzirire kusangana nepatya rangu murazvo?
Kuziva simba kunogona sei kuva kwakanyanya?
Simba rekuvimba rinogona sei kuva rakanyanyisa?
Simba rakadzikama rinogona sei kuve rakanyanyisa?
Simba rinoshanda rinogona sei kunyanyisa?
Simba rine simba rinogona sei kuve rakanyanyisa?
Simba rinokurudzira rinogona sei kuva rakanyanyisa?
Ego uye Izvo Zvepanyama
Chii chinogarwa nevanhu kubva kuvabereki vavo?
Kumbira Mytika kune Zano
Iva wekutanga kuziva patinotumira mhinduro nyowani kumibvunzo yako yemweya.
Mytika Speak chishandiso kune avo vari kusangana nekumuka pamweya, mapatya murazvo kusangana, kudzidza kuratidza, kutsvaga kwavo Kwechokwadi Kwega, uye mimwe misoro yakawanda nekupa mhinduro kumibvunzo yemweya.
Random Kune Iwe
Ndeupi hukama pakati pezvinhu zvese nepasi / Mwedzi / Zuva?
Sei vanhu vasingandigamuchire?
Sei mweya mumwe ungasarudza kutsemuka kuita maviri?
kuziva kuziva pfungwa rudo rwamwari Ego kunyanyisa Mwari haiku kufemerwa zvidzidzo kuratidzwa micropoetry kukura kwevanhu nhetembo nhetembo ipfupi zvokunamata kunamata zvidzidzo zvemweya Chokwadi Chaicho Twin Moto